Global Voices teny Malagasy » Iran : Taona vaovao no manomboka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Marsa 2008 22:17 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Tokinao
Sokajy: Iràna, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Omaly no andro voalohany amin'ny lohataona sy andro voalohan'ny taona iraniana. Ny fetin'ny Nowruz na koa Norouz  dia ankalazaina any Iran sy firenena maro tahaka an'i Tajikistan sy Afghanistan. Mpiblaogy maro no nankalaza izany fety izany, koa dia nifampirary soa sy nifanakalo hevitra izy ireo tamin'izany andro izany.
Ny sasany tahaka an'i Raze No (adika hoe “tsiambaratelo vaovao”) dia nanampy  sary maromaro momba izany fihetsiketsehana sy fety izany ao amin'ny blaoginy (jereo ny santionany etsy ambony).
I 1Pezeshk ( adìka hoe “dokotera iray”amin'ny teny persianina), mpiblaogy mpanakanto iray, dia nanentana mpiblaogy maro mba hanoratra lahatsoratra  momba ity taom-baovao Iraniana ity.
Nosoratan ‘i Khabgard [Fa] ankolaka fa nanome fanomezana vaovao tamin'ny faran'ny taona teo ny governemanta iraniana : “gazety an-tsoratra sivy no nofoanana!”. Nampiany koa fa naneho zava-tsy ampoizina maro koa io governemanta io, noho izany dia tsy azon'ny vahoaka iranianina vinaniana intsony izay havoakan'ity taona vaovao ity.
Nosoratan'i Falosofah  ny fahasarotan'ny asan'ny mpanoratra sy mpandika teny iranianina. Hoy izy :
Ny blaogin'i Azadi Barabary [Fa] dia nampita  ny hafatr'i Kaveh Abbassian, mpianatra mpitari-tolona amin'ny sokajy ankavia. Lazainy fa ireo namany akaiky dia mbola any an-tranomaizina hatrany, misedra famoretana ireo ny mpianatra any amin'ny anjerimanontolo rehetra, ary tandindonin-doza ny fahalalahana milaza hevitra sy ny fahalalahana hivondrona. Hoy ihany izy :
Jomhour dia milaza  fa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny hafatra fiarahabana tratry ny taona nataon'ny Filoha Ahmadinejad. Io filoha io manko dia manindraindra ny ireo zava-bita ara-ekonomoka, ara-kolotsaina, ary ara-pôlitika tamin'iny taon-dasa iny. Lazain'io mpiblaogy io fa ny tsy fisian'ny fitantanana dia miteraka tahan'ny tsy an'asa ambony be, ary koa fahalafosan'ny vidim-piainana. Lazainy koa fa afaka hovaintsika ny hevitr'izany teny hoe “zava-bita” izany ao amin'ny rakibolana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/03/22/705/
 Nowruz na koa Norouz: http://en.wikipedia.org/wiki/Nowruz